Joël Andrianomearisoa: hampahafantatra ny sanganasany | NewsMada
Joël Andrianomearisoa: hampahafantatra ny sanganasany
Par Taratra sur 09/02/2019
Joël Andrianomearisoa, Malagasy mikolo ny kanto ankehitriny, fanta-daza, indrindra, eo anivon’ireo mpankafy sy matihanina ary mpisehatra amin’ity tontolo iray ity, any ivelany any. Izy no hanome taratra ny talenta ananan’ny Malagasy, mandritra ny “Biennale d’art de Venise”, andiany faha-58. Marihina fa sambany ny hisy Malagasy handray anjara amin’ity hetsika goavana sy avo lenta ary ahitana ireo andrarezin’ny zavakanto avy amin’ny vazantany efatra ity.
Heverina fa ho an’ny ankamaroan’ny Malagasy, eny, na ny aty an-tanàn-dehibe aza, vahiny amin’ny sofina ihany ny anaran’i Joël Andrianomearisoa. Misy ihany koa ireo efa nahita ny sanganasany, na tamin’ny “internet” ihany aza izany, saingy mbola tsy mahatsapa loatra ny tian’ny mpanakanto asongadina.
Manome fotoana azy ireo ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely sy ity mpanakanto ity, ny asabotsy 16 febroary izao, ao amin’ity foibe miahy ny kolontsaina ity. Hamelabelatra kokoa ny fanehoany ny fihetseham-pony amin’ireo akora ampiasainy i Joël Andrianomearisoa.
Ho an’ireo efa nahita ny sanganasany, tsy vitsy ny variana sy mandinika lalina, indrindra ny amin’ny fandrindrana ireo akora samihafa, toy ny lamba, ny plastika, ny taratasy, sns, izay toa misaritaka. Mandritra ity fihaonana amin’ny mpanakanto ity ny hanazavany ny fahatsapany ny hoe kanto.